Madaxweyne Farmaajo oo qaabilaya wafdi uu hogaaminayo Wasiiru dowlaha wasaarada arimaha dibada Dalka Sacuudiga – Walaal24 Newss
Madaxweyne Farmaajo oo qaabilaya wafdi uu hogaaminayo Wasiiru dowlaha wasaarada arimaha dibada Dalka Sacuudiga
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya mudne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa qaabilay wafdi ka socda Dowladda Sacuudiga Careebiya, oo uu hogaaminayay Wasiiru dowlaha wasaarada arimaha dibada Sacuudiga u qaabilsan Afrika Axmed Cabdulcasiis Kattan.
Kulanka oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa dhambaal uu ka siday Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis soo gaarsiiyay Madaxweyne Farmaajo.
Wararka waxay intaa ku darayaan in Soomaaliya ay ka mid tahay dalal lagu casuumay shir ay qabaqaabineyso Dowladda Sacuudiga oo ku saabsan Amniga Badda Ca iyo isbaheysi ay dooneyso iney sameystaan dalalka ku teedsan Badda Cas.
Dhinaca kale dalka Sucuudig ayaa waxaa lagu wadaa in Bisha Ramadaan lagu qabto Shir looga hadli doono arrimo ku aadan iskaashiga iyo wax wada qabsiga, kaasi oo u dhexeeya dowladda Sacuudiga iyo dowladaha Afrika.
Booqashada Maanta uu ku soo gaaray Magaalada Muqdisho Wasiiru dowlaha iyo wafdigiisa ayaa la sheegay inay qeyb ka tahay safaro uu ku marayo dalalka Gobolka Geeska Afrika.
Maamul Goboleedka Puntland oo dib u celiyay muhaajiriin ka soo jeeda Dalka Itoobiya